Jade Buddha Pendant (Chando / Moss Marbling) - Popular Jewelry
Jade Buddha Pendant (Chando / Moss Marbling)
Zvidimbu zveJade seichi chinosekesa kuseka Buddha vane tsika vakapfekwa nemaChinese; vanonzi vanounza vanopfeka rombo rakanaka uye mufaro vachityaira zvakaipa nemweya.
Simbi yakakosha: 14 Karat Ndarama (pendende bhaari)
Dombo: Jade (Type A)
Pendant size: 0.875 "(Height) x 0.960" (Kureba)
Saizi dzose dzinofungidzirwa.
Ngetani yakatengeswa zvakasiyana.
Ndokumbira utifonere kana kutumira email kuti uwedzere kubvunza kana kutenga chinhu.
Piece yakanaka uye yakapfuura zvandaitarisira. Kudzoka kune zvimwe ASAP
Zvinotyisa Sevatengi Service
Pakutanga ndakanga ndachaira pendendi yaive kunze kwekutengesa, asi Kevin, kubva popular jewelry ndakavimbisa kudzorera mari yangu uye yakandibatsira mukundibatsira kutora pendantti inokwana zvandaitsvaga. Ini ndainakidzwa nemhinduro nekutarisirwa kune zvakadzama; pendant aive akakwana. Uye nguva inotevera kana ini ndiri muNCC ndine chokwadi chekumira ndiri ndoga panguva ino!
Chokwadi! Ini ndinowana zvichemo zvakawanda. Kukurukurirana kwaive kwakasiyana nehukuru hwekukurumidza kutumira Chokwadi acharamba achitenga newe.